facebook အကြောင်းကိုမေးမြန်းလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - SafePoster ဘလော့
တကယ်ပါပဲ, တစ်ဦးက Facebook စာမျက်နှာတစ်ခုနှင့်ညီမျှမဟုတ်ပါဘူး Facebook က ပရိုဖိုင်းကို. တစ်ဦးက Facebook တွင်စာမျက်နှာသင်သည်သင်၏အဖွဲ့အစည်းအတွက်ဖြစ်စေ Facebook ပေါ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအကောင့်ဖြစ်ပါသည်, အသင်း, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း. စသည်တို့ကို, သောပန်ကာစာမျက်နှာအဖြစ်ဖြည်. တစ်ဦးက Facebook ကို Profile ကို Facebook ပေါ်တွင်တစ်ဦးချင်းစံချိန်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျ Facebook ကို join လိုက်တဲ့အခါ, သင်တစ်ဦးကိုယ်ရေးဖိုင်ရ. သငျသညျအပေါင်းအဘော်နှင့်ပေါင်းသင်းနိုင်မည့်ဤသူကားအ, သူတို့ရဲ့ပို့စ်များကိုကြည့်ရှု သင့်ရဲ့သတင်းကိုအစာကျွေးခြင်းအတွက်, သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကို post, pictures.etc. ကျနော်တို့အခုအချိန်မှာမယ့်သင့်ရဲ့ site ကိုအောင် Facebook မှစာမျက်နှာများကိုကူညီခြင်းနှင့်ဘုံ facebook ကိုမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများနားလည်.
ငါသည်ငါ့ Facebook မှာ Page URL ဘယ်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိကြဘူး?
သင် program ကိုအတွင်းပိုင်းကနေသင့်ရဲ့ Facebook ကို 's Page မှာ gander ယူပြီးကြသောအခါ, အဆိုပါ Facebook မှာ Page URL ကိုပရိုဂရမ်များ၏အမြင့်ဆုံးအမှတ်ကိုမှာတည်ရှိပြီးဝဘ်လိပ်စာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ www.facebook.com/ တူတစ်ခုခုကိုကြည့်သင့်ပါတယ်(MyBusiness).
ငါသို့သော်ဘာမျှမဖြစ်ပေါ်ငါ့အကို Facebook စာမျက်နှာ၏ URL ညပ်. အဘယ်ကြောင့်?
သငျသညျထိထိရောက်ရောက် Facebook ကစာမျက်နှာ URL ကိုပုံတူကြသည်သေချာ. အကူအညီအဘို့ဤရှေ့တော်၌ထိုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကိုကြည့်ပါ. သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုယ်ရေးဖိုင်ဘို့သင့်ကိုဝင်နေသော URL ကိုတစ်ဦးက Facebook စာမျက်နှာအဘို့အကြောင်း Watch နှင့်မ. ကျနော်တို့လက်ရှိအချိန်မှာသင့်ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်းကနေ site တစ်ခုလုပ်အားကောင်းကြဘူး. ထို့အပြင်, သင့်ရဲ့စာမျက်နှာ setting တွင်အဘယ်သူမျှမဧရိယာအဖြစ်အသက်အရွယ်နယ်နိမိတ်ရှိပါတယ်သေချာ.
ငါသည်ငါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုက Facebook စာမျက်နှာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. အဘယ်သို့ငါတဦးတည်းလုပ်လိမ့်မယ်?
လွယ်ကူသော! ရိုးရှင်းစွာအအောက်ဆက်သွယ်မှုကိုကလစ်နှိပ်ပါ. သငျသညျရှိပါတယ်လိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျ Facebook ကပေးသောနည်းလမ်းများစေခြင်းနှင့်လိုက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာမျက်နှာ၏မျိုးကိုရွေးချယ်ပါ.
စာမျက်နှာ facebook ပရိသတ်တွေ Make. သငျသညျကို Facebook မှလမ်းကြောင်းပြောင်းပါလိမ့်မည်.
ငါ၏အ site ကိုဆဲလ်ဖုန်းများအတွက်ချီတက်ဖြစ်ပါတယ်?
Facebook ကအဖွဲ့များအမျိုးအစားများ - အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်
လုံးဝ! Facebook မှာဖွဲ့စည်းပုံရွေးချယ်မှုများ၏အများစုလုံးဝတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြပြီးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခြုံငုံ gadgets ကိုကြည့်ခြင်းနှင့် facebook ကိုရဲ့ login လွယ်ကူသည်.
သင်တဦးတည်းစံချိန်အောက်မှာချင်ပါတယ်အဖြစ် Facebook ကအသုံးပြုသူခရီးစဉ်၏တူညီသောအရေအတွက်သည်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. ကြင်နာစွာမှတ်စု, မည်သို့ပင်ဆိုစေ, တစ်ခုချင်းစီကိုအပြည့်အဝအကောင့်ဒီဇိုင်းအသစ်တဦးတည်းရဲ့ site များအတွက်တရားဝင်ကြောင်း.
တစ်ဦးကို client ၏လုံခြုံရေးနှုန်းခဲသို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်နှုန်းကုန်ကျစရိတ်သင်တို့အပေါ်မှာတစ်ဦးရွေးချယ်မှုအပေါ်အခြေချရန်ရှိသည်သော့ချက်တိုင်းတာဖြစ်ကြောင်း. ကလစ်နှိပ်နှုန်းကုန်ကျစရိတ် (CPC), ဆိုင်တဲ့ရမှတ်, တက်ကြွဧည့်သည်ကလစ် နှိပ်. ရာခိုင်နှုန်း (CTR နည်း), နှင့်အခြားပင်မတိုင်းတာတကယ်တစ်ဦးမြှင့်တင်ရေးအလုပ်လုပ်ကိုင်စေခြင်းငှါအဘယျကွောငျ့သငျသညျမှထုတ်ဖော်ရန်အမှတ်အသားများအဖြစ်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း. သူတို့ကတစ်ဦးမရှိမဖြစ် KPI ဖြစ်ရည်ရွယ်ကြသည်မဟုတ်. ရလဒ်နှုန်းကုန်ကျစရိတ် (ခဲ, စာချုပ်, အစီအစဉ်, နောက် ... ပြီးတော့။) အားလုံးမြှင့်တင်တိုင်း၏အုပျခြုပျ!
ငါ့ Facebook မှာကြော်ငြာကို run ဖို့အဘို့အဘယ်သို့အတိုင်းအတာအထိပြုလုပ်အကြံပြုလိုတယ်လိမ့်မယ်?
သင် ... သင့်တယ် သင့်ရဲ့ကြော်ငြာကို run နေသမျှကာလပတ်လုံးကဆက်လက်အဖြစ်ကျော်ပြောင်းလဲနေတဲ့သို့မဟုတ်သင်လိုအပ်နှုန်းမှာဖျော်ဖြေ. ငါဖျော်ဖြေအပေါ်ကျနော်တို့ကစောင့်ရှောက်အရာအားလုံးရှိနေသော်လည်းအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရှည်များအတွက်အလားတူမြှင့်တင်ရေးအပြေးတဲ့ဖောက်သည်ခဲ့ပြီးပြီ.
သင်ကွပ်မျက်တစ်ဖန်ရက်ပေါင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုးရွားရန်နှင့်ထိုနေ့ရက်ကာလ၌ ricochet မှပေါ်လာပါဘူးစတင်မြင်သောဖြစ်ရပ်အတွက်, သငျသညျမဟာဗျူဟာကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်. ပြီးတာနဲ့နေ, အခြားရုပ်ပုံသို့မဟုတ်အခြားစမ်းသပ်မှုအပြေးကိုကူညီနိုငျ.
facebook အကြောင်းကို, အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ, fb မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ, မေးခွန်းများကိုနှင့် facebook ကို၏အဖြေကို
ရစ်ချတ် E ကို. Davis က
အကြောင်းအရာ၏ဆွဲဆောင်မှုအပိုင်း. ကိုယ့်သင့်ရဲ့ဘလော့ဂျပို့စ်များကိုအကောင့်ငါတကယ်ခံစားရကြောင်းဆိုကြသည်ရန်သင့်ဘလော့ဂ်ကိုအပေါ်သို့နှင့် Access မြို့တော်လဲ. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ငါသည်သင်တို့ကို entry ကိုတသမတ်တည်းလျှင်မြန်စွာရသင့်ရဲ့ Feeds နဲ့တောင်ငါအောင်မြင်မှုအတွက်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းပါလိမ့်မယ်.
ငါတကယ်သင့် Blog ၏ဒီဇိုင်းနှင့် layout ကိုခံစားတယ်. ဒါဟာငါ့ကိုဒီနေရာမှာလာနှင့်ပိုပြီးမကြာခဏသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အဘို့အကပိုပြီးသာယာစေသည်ဖြစ်သောမျက်စိပေါ်မှာအလွန်လွယ်ကူပါတယ်. သင်သည်သင်၏ဆောင်ပုဒ်ကိုဖန်တီးရန်တစ်ဦးပြုစုသူထွက်ငှားရမ်းခဲ့ပါ? ခြွင်းချက်အလုပ်!